၁၈ ဇွန်၊ ၂၀၁၈
ဒီတပတ် English American Style: Idioms ကဏ္ဍမှာ အရေပြား အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ (Skin) ကို အခြေခံတဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ ဖြစ်တဲ့ To have thin skin, To have thick skin နဲ့ To get under one’s skin တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) To have thin skin
To have (ရှိတာ)၊ thin (ပါးလွှာတာ)၊ skin (အရေပြား) ဆိုတော့ စကားစုတစုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ပါးလွှာတဲ့ အရေပြား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အသုံးကို Adjective နာမ၀ိသေသန အဖြစ်သုံးမယ်ဆိုရင် Thin skinned လို့သုံးပါတယ်။ အရေပြားပါးလွှာတယ်ဆိုကတည်းက ခံနိုင်ရည် သိပ်မရှိတာကတော့ ထင်ရှားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က ကိုယ့်အပေါ် ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့ မှုတွေကို နည်းနည်းလေးမှ မခံနိုင်တာ၊ သည်းခံနိုင်စိတ် မရှိတာ၊ လွှတ်ခနဲဆို ပြန်ပြီးပြောတတ်တာ၊ ဘာကိုမှ သည်းမခံတတ်တာ စသဖြင့်ကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဘန်းစကားမှာတော့ ထစ်ကနဲဆို ပြန်ပြောလေ့ရှိတာ၊ စိတ်က လက်တဆစ်ပဲ ရှိတာ စသဖြင့်ကို Thin skin လို့ ရည်ညွှန်းပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Joe gets angry very easily. He is very thin skinned !
Joe က သိပ်ကို ဒေါသထွက်လွယ်တယ်။ ကဲ့ရဲ့ ပြောဆိုမှုတွေကို သူနည်းနည်းလေးမှ သည်းခံစိတ်မရှိဘူး။
(၂) To have thick skin
To have (ရှိတာ), thick (ထူတာ)၊ skin (အရေပြား) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံး တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ထူတဲ့အရေပြား ရှိတာပေါ့။ To have thick skin အသုံးဟာ To have thin skin အသုံးနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားထူကတည်းက ခံနိုင်ရည် ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ ထင်ရှားပါတယ်။ ဘာပြောပြော အပြောခံတာမျိုး၊ မြန်မာအသုံးမှာခံရပေါင်းများလို့ အရေထူနေပြီ၊ ဘယ်သူ ဘာပြောပြော ဂရုမစိုက်ဘူး၊ စိတ်ထိခိုက်မှုမရှိဘူး၊ မခံမရပ်မဖြစ်ဘူးကိုဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Joe, our manager is thick skinned. He does whatever he wants and couldn’t care less what others think!
ကျနော်တို့ မန်နေဂျာ Joe က အရေထူနေပြီ။ သူလုပ်ချင်တာကိုလုပ်ပြီး၊ ဘယ်သူ ဘာပြောပြော ဂရုမစိုက်ဘူး။
(၃) To get under one’s skin
To get under (အောက်ကိုရောက်သွားတာ)၊ one’s (တဦးတယောက်ရဲ့ ) skin (အရေပြား) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က လူတဦးတယောက်ရဲ့  အရေပြားအောက်ကို ရောက်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံ အဓိပ္ပါယ်က တခုခုနှင့်ပတ်သက်လို့၊ လူတဦးတယောက်အတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာ၊ စိတ်တိုစေတော၊ မခံချိမခံသာ ဖြစ်စေတာ။ ကြည့်လို့မရတာ ကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Just ignore him. Don’t let his jokes get under your skin!
သူ့ ကို ခေါက်ထားလိုက်စမ်းပါ။ သူနောက်ပြောင်တာတွေကြောင့် စိတ်ထဲမခံချိမခံသာ မဖြစ်နဲ့။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Skin စကားလုံး အီဒီယံအသုံးအနှုန်းတွေက To have thin skin, To have thick skin နဲ့ To get under one’s skin တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ကလေးအရေပြားရောဂါ - နှင်းကူနာ နဲ့ အင်ပျဉ်ထခြင်း
ရေကြီးပြီးနောက် အဖြစ်များတဲ့ အရေပြားရောဂါများ